မြန်မာမွတ်စလင်(မ်)ရေးရာ(ဂျာမဏီ): 10/01/2010 - 11/01/2010
မကွေးမြို့နယ် မကွေးမြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက် (၃) မိုင်ကွာ ဆားတိုင်ကန် ရွာမှာ (၁၇-၁၀-၂၀၁၀) တနင်္ဂနွေနေ့၊ ည၇နာရီ ၁၅ မိနစ်အချိန် (မိထူး) ဆိုသော ဦးခေါင်းနှစ်လုံးပါတဲ့ ဒီနွားမလေးကို မွေးဖွားပါတယ်။ ပိုင်ရှင် အမည်တွေကတော့ ဦးကက်စိန်၊ ဒေါ်အမာတင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ နွားမကြီး က ဖရီရှန် နို့စားအမျိုးအစား နွာမကြီးပါ။ သူ့ကို မေထွန်းလို့ နာမည် ပေးထားပါတယ်။ ယခုနွားကလေးနဲ့ဆိုရင် (၃) သား (၃) ခါ မွေးဖွားပြီး ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ နွားငယ်ကလေး ဦးခေါင်းနှစ်လုံးခွဲထွက်ရာ အလယ်တည့်တည့်မှာ မျက်စေ့တစ်လုံး သာ တွေ့ရပါတယ်။ ဦးခေါင်းနှစ်လုံးရဲ့ ၀ဲ၊ ယာဘက်တွေမှာ ကြည်လင်ထောက်ပနေတဲ့ မျက်လုံးနှစ်လုံး၊ ပါးစပ်။ နားရွက်၊ နှာခေါင်းတွေ အစုံအလင်ပါပါတယ်။ ခလယ် (အတွင်းဘက်) က မျက်လုံးသာ တစ်လုံးထဲပါနေပါတယ်။ ဦးခေါင်းကြီးက နှစ်လုံးဆိုတော့ ခေါင်းကို ကောင်းကောင်းမထူနိုင်ပါဘူး။ နို့စို့တဲ့အခါ တစ်ဘက်ခေါင်းက နို့စို့နေရင် အခြားတစ်ဘက်ခေါင်းကလဲ လုပြီးနို့စို့နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နွားမကြီးဆီက နို့ကို ညစ်ယူပြီး နို့ဗူးနဲ့ ခေါင်းတစ်ဘက်ဆီကို သူ့သခင်မက လှည့်တိုက်ပေးနေတာကို မြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ နွားလေးရဲ့ အမြင့်ဟာ နှစ်ပေခွဲဖြစ်ပြီး အရှည်ကတော့ သုံးပေခွဲကျော်ကျော် ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ ယနေ့အထိ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အထူးအဆန်းဆိုတော့ မိုးထဲ လေထဲမှာကိုး ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က လာရောက်ကြည့်ရှုနေကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်က ဘုရားတွေ တစ်ချို့မှာ ( မနုသီဟ ဖင်နှစ်ခွ) ရုပ်တွေ၊ ပုံတွေကို မြင်တွေ့ကြရပါတယ်။ ယခုတော့ (နွားမဥဿဘ ဦးခေါင်းနှစ်ခွ) နဲ့ ထူးထူး ဆန်းဆန်း မြင်တွေ့နေရပါပြီ။ လာရောက်ကြည့်သူတွေ ကတော့ နွားလောကမှာ ဦးခေါင်းနှစ်လုံးနဲ့နွား ဘီးလူး လောကမှာ ဒသဂီရိ ( ခေါင်း ဆယ်လုံးနဲ့ ) ပေါ်လာ ကြတယ်။ ကျုပ်တို့ လူ့လောကမှာတော့ ခေါင်းအမျိုးမျိုး နဲ့ ပြောင်းပြောင်းပြီး လာလိုက်ကြတာ မနည်းတော့ ပါဘူး။ သူတို့ကလဲ ဆင်ဖြူခြောက်ကောင်နဲ့ မင်္ဂလာ အယူတော်ခံသလို။ ကျုပ်တို့ကလည်း ဒီ ( နွားမဥဿဘ ဦးခေါင်းနှစ်ခွ) လေး ထူးထူးခြားခြား ပေါ်လာတာကို မင်္ဂလာ ယူရမှာဘဲဗျို့။ အင်း ဒါမြန်မာပြည်အတွက်တော့ အတိတ်နိမိတ်ကောင်းမှာလား။ ဆိုးမှာလား။ ဆိုတာကိုတော့ စောင့်မျှော်လို့သာ ကြည့်ကြပေရဦးမည်ဟု တီးတိုး တီးတိုး သဖန်းပိုးထိုးပြီး ပြောဆိုနေကြသော အသံများကို ကြားသိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျား။
မှတ်ချက်။ ။ မည်သည့်ဂျာနယ်များမှ ဖော်ပြခြင်းမရှိသေးပါ။ မြန်မာပြည်၏ အတိတ် နိမိတ်များအား ဤ သတင်းကို အခြေခံ၍ ပညာရှင်များ၊ စာဖတ်သူများ ဝေဖန် ဆွေးနွေး ပေးတော်မူကြစေလိုပါသည်။
Posted by mbma at Wednesday, October 27, 2010 No comments:
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲ..မှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့..ရေဘ၀ဲ ပေါလ်...သေသွားရှာပြီ
ပြီးခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲတွင် ဂျာမနီ အသင်း၏ ပွဲစဉ်များကို ရာနှုန်းပြည့် မှန်ကန်စွာ ခန့်မှန်ပေး နိုင်ခဲ့သည့် စိတ်တန်ခိုးရှင် ရေဘ၀ဲ ပေါလ်သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် သေဆုံးသွား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သူနေထိုင်ခဲ့ရာ အဏ္ဏ၀ါ ပြတိုက်မှ တာဝန်ရှိသူ များ၏ ပြောကြားချက် အရ ရေဘ၀ဲ ပေါလ်သည် ပြီးခဲ့သည့် တနင်္လာ ညအထိ ကောင်းမွန်စွာ ရှိနေခဲ့ သော်လည်း ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် သူ၏ မှန်ပုံး အတွင်း၌ သေဆုံးနေ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သူသေဆုံးသည့် အချိန်တွင် အသက် ၂ နှစ်ခွဲ ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အသက်အရွယ်၌ သေဆုံးခြင်းသည် ရေဘ၀ဲ တစ်ကောင်၏ သာမန် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ကိစ္စကြောင်း အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူ များက ဖြေရှင်းခဲ့ကြသည်။ ရေဘ၀ဲလ် ပေါလ်သည် သာမန် သဘာဝ ဖြစ်ရိုး ဖြစ်စဉ် အတိုင်းသာ သေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပြင်ပ ပယောဂ လုံးဝ မပါဝင် ကြောင်းလည်း ပြတိုက် တာဝန်ရှိသူ များက ဆိုခဲ့သည်။
ရေဘ၀ဲ ပေါလ်သည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ တောင်အာဖရိက ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲတွင် ဂျာမနီ အသင်း၏ ပွဲစဉ် ၇ ပွဲကို ရာနှုန်းပြည့် မှန်ကန်အောင် ခန့်မှန်းပေး နိုင်ခဲ့သည့် အပြင် စပိန်နှင့် ဟော်လန်တို့ ဗိုလ်လုပွဲ ကိုလည်း စပိန် ဗိုလ်စွဲမည်ဟု မှန်ကန်စွာ ခန့်မှန်းနိုင် ခဲ့သည့် ထူးခြား ရေသတ္တ၀ါ ဖြစ်သည်။
အောက်မှာတွေ့ရတဲ့ အလံတွေကို တော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရှေးဟောင်းအလံများ ခေါင်းစဉ်နဲ့ http://fotw.fivestarflags.com/mm-hist.html ဆိုဒ်မှာတွေ့ရတာပါ .. သုတေသီရဲ့ အဆိုအရတော့ မြန်မာအလံတွေရဲ့ အကြောင်းကစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပေမဲ့ ခုချိန်ထိ ပြည့်စုံစွာ မစုဆောင်းနိုင်သေးဘူး လို့ ဆိုပါတယ်..
ဒီအလံ ၆ ခု ကတော့ ဗြိတိသျှ လက်အောက် မကျရောက်မီက မြန်မာနိုင်ငံတော် အတွင်း အသုံးပြုခဲ့သော အလံတော်များပါတဲ့ ..
(၁) ရွှေဟသာင်္ အလံ တော် ( ၁၃၀၀ - ၁၅၀၀ အကြား)
(၂) သူရဲကြီး အလံ (၁၃၀၀ - ၁၈၈၅ အကြား)
(၃) ကုန်းဘောင်ခေတ်အလံ (၁၇၀၀ - ၁၈၈၅)
(၄) ၁၉ ရာစု အလယ် မင်းတုန်းမင်း ခေတ်အလံ
(၁) Uncertain flag, 1937-1939
(၂)9February 1939 (introduced6February) - 1941
(၃) Governor's Flag 1939-1941
(၄) 1940 - 1945: Japanese rule
(၅) 1942 Synyethe-Wunthann party
(၆) Japanese puppet state 1 August 1943 - 1945
(၇) Anti-Japan movement 1943 - 1945
(၈) 1948-1974 Flag of Burma
(9) 1974 - 2010
(၁၀) ၂၀၀၆ - ၂၀၀၇ မှာ အဆိုပြုပြီး အတည်မပြုနိုင်ခဲ့သော အလံ
(၁၁) အသစ်စက်စက် အလံတော်
၃ ရောင်ချယ် အလံများနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၀ီကီထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ပုံတွေ
 Green, red, and yellow
See also: Pan-African colours
Flag of Hillegom, Netherlands
Flag of the Shan State, Myanmar
Flag of the Bolívar Department of Colombia
Flag of the State of Burma (1943–1945)
Unsuccesful proposed flag of Burma (2006)
Flag of Burma adopted October 21, 2010.
အရွယ်တူ ကြယ်ဖြူ ၁၄ လုံး နဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာမို့ အဲဒီအလံတွေမီးရှို့ရမယ်လို့ရုတ်တရက်ကြီး ကြားလိုက်ရတော့ အလန့်တကြား ဖြစ်မိရပါတယ်..။
အနီရောင်သည် ရဲရင့်ခြင်း၊ အပြာရောင်သည် ငြိမ်းချမ်းခြင်း တည်ကြည်ခြင်၊ အဖြူရောင်သည်သန့်စင်ခြင်း ရိုးသား ခြင်း၊ အရွယ်တူ ကြယ်ဖြူ ၁၄ လုံး သည် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ၁၄ ခု အား တန်းတူညီမျှသည်ဟု ကိုယ်စားပြုခြင်း၊ စပါးနှံ နှင့် စက်သွား သည် မြန်မာပြည်၏ အခြေခံအင်အားဖြစ်သော အလုပ်သမား နှင့် လယ်သမားထုအား ကိုယ်စားပြုခြင်း.................ဤသည်တို့ မှာကား.. ကျမ တို့ ငယ်စဉ်က ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ရသော ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော် အလံ အကြောင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။
ကြာသပတေးနေ့ က ရုတ်တရက်ကြီး သင်္ခါ ရသဘောတရား နဲ့ မီးလောင်တိုက်သွင်းခံလိုက်ရသော ကြယ် ၁၄ ပွင့်ရံ နိုင်ငံတော် အလံ ၏ အကြောင်း အား အကြောင်းကြောင့် ကျမ စနေနေ့ ညနေက မှ သိခဲ့ရပြီး.. စိတ်ပျက် လက်ပျက် ဖြစ်နေသော ကျမ . ကို ကျမတို့ PD က မင်း နှယ် . မင်းတို့ တိုင်းပြည်မယ် အစိုးရသစ် ပါလီမန်ဖွဲ့ပြီးတဲ့ချိန် ပြန်ပြင် ရင် ရတဲ့ ကိစ္စတွေပဲ Take it easy. လို့ ပြောလိုက်တာမို့ .. ဟုတ်သား ပဲလေ.. လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ဖြေသိမ့်မိပါတယ်. ...ဒါပေမဲ့.. ပြည်သူကို အမှန်တကယ် ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ အခြေအနေက ဘယ်လိုမှန်း မသိ နိုင်သေးတာကတော့ တပိုင်း ပေါ့လေ... ပြီးတော့ .. အလံ အသစ်လဲ တာနဲ့ အလံ အဟောင်းက မီးရှို့ စရာ လိုလို့ လား...
လာမဲ့မျိုးဆက် သစ်က လူငယ်လေး တွေ သူတို့ အလံ တော်ကို ဘယ်လို ပုံ ဖော်ကြမလဲ.. ဆက်လက်တွေးတောနေမိပါတယ်.
Posted by mbma at Monday, October 25, 2010 No comments: